Birkhead, Troutbeck - I-Airbnb
Troutbeck, England, i-United Kingdom
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Jeanette
I-Birkhead ingenye yezindlu ezinhle kakhulu e-Troutbeck enesithombe sekhadi leposi elinokubukwa okumangalisayo nhlangothi zonke. Leli fulethi eliphansi elihlotshiswe kahle lilungele ukubaleka ngokuthula, lilungele abahamba ngezinyawo.
I-Birkhead itholakala enhliziyweni ye-Troutbeck. Kukhona i-tearoom ethandekayo nesitolo sedolobhana imizuzu nje ukusuka. Kunezindawo zokushicilela ezinhle ezi-2 edolobhaneni, i-Mortal Man, uhambo olude kanye neQueens Head esanda kulungiswa, yomibili ihlinzeka ngokudla okuhle nama-ales wendawo. Uma ungaphandle komnyango wangaphambili uqonde emigwaqweni yezinyawo eyalukayo eholela eziwa eziwumbukwane.
Ungena endaweni nge-sunroom ejabulisayo enikeza ukubukwa kwe-panoramic kuwo wonke ama-falls angomakhelwane. Igumbi lelanga linendawo yokushisa yezingodo ethokomele futhi linikezela ngefenisha ewubukhazikhazi kanye nendawo yokudlela ngokubuka ingadi namawa. Igumbi lelanga liholela ngqo kuvulandi, indawo ekahle yokubamba ilanga lasekuseni futhi ujabulele ikhofi. Kukhona indawo enkulu enotshani kanye nengadi egcwele kahle enezihlahla ezibanzi ezifaka ama-azalea amaningi anemibala nama-rhododendron avuthiwe.
Igumbi lelanga liholela endleleni yehholo ene-parquet enhle yaphansi. Kunamakamelo okulala amabili abukekayo angaphandle kwephasishi womabili anemibhede yamapulangwe yakudala kanye nezokulala zikanokusho. Elinye lamakamelo okulala linikeza igumbi lokugezela le-ensuite elineshawa. Kunegumbi lokugezela lomndeni elengeziwe elinebhavu neshawa ephezulu. Womabili amagumbi okugezela ahlinzeka ngokunethezeka kokufudumeza kwangaphansi.
Ikhishi likunikeza konke ozokudinga okuhlanganisa itiye nekhofi. Uma udinga isidlo sakusihlwa nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi sokuhlala kwakho kukhona imenyu yokudla yezifundo ezi-3. Ngicela ungithinte ngqo kuwo wonke amamenyu, izinketho nezintengo. Konke ukudla kufanele ku-odwe kusenesikhathi futhi kuncike ekutholakaleni. Konke ukudla okwengeziwe kuzokhokhelwa ngesikhathi uhlala. Uzonikezwa ukudla kwakho egumbini lelanga elibheke ukubukwa okuhle, okuphelele kunoma yisiphi isenzakalo.
I-Troutbeck iwuchungechunge lwemizana endaweni yokongiwa kwemvelo futhi ihlanganisa izakhiwo ze-National Trust ezifana ne-Townend. Idume ngezakhiwo zayo eziningi esohlwini kanye nezakhiwo zezilimi zomdabu. Igcina izakhiwo zayo eziningi zekhulu le-17 nele-18. Isonto lendawo lihamba imizuzu embalwa futhi lakhiwa ngo-1736 endaweni efanayo nendlu yesonto yekhulu le-15, eyakhiwa kabusha ngekhulu le-16. Njengamanye amasonto amaningi yalungiswa ngabakwaVictoria abagcina umbhoshongo base bengeza amafasitela obuciko nemisebenzi yezandla. Inengilazi enemibala ye-pre-raphaelite engavamile.
Amapulazi endaweni afuye izimvu ze-Herdwick. I-Troutbeck Park Farm yathengwa ngu-Beatrix Potter ngo-1928 ngaleyo njongo futhi lezi zimvu zisatholakala emasimini azungeze i-Birkhead.
I-Troutbeck isendaweni ekahle amamayela angu-3 enyakatho yedolobha elihle laseWindermere kanye nekhilomitha elilodwa ukusuka ogwini lwechibi laseBowness-on-Winderemere nazo zonke izinto eziheha izivakashi. Idolobhana lase-Ambleside elinempilo liqhele ngamamayela angu-3.5 kuphela, linikeza izitolo eziningi ezihlukile kanye nenqwaba yama-pubs nezindawo zokudlela. Le ndawo inikezela ngenkanyezi ye-Michelin yokudlela eduze nezindawo zobumnandi ezithokomele kanye nezindawo zokudlela.
4.98 · 141 okushiwo abanye
Hlola ezinye izinketho ezise- Troutbeck namaphethelo